Playground: The Ambush | YoeYar CG Blog
5 thoughts on “Playground: The Ambush”
John Moe Eain on January 12, 2011 at 12:53 am said:
I got one of the outdoor experience.
Anyhow thanks :P
Ma Aeint on January 12, 2011 at 7:15 am said:
Well done, Congrad!
MrDBA on January 12, 2011 at 8:43 am said:
kotharthar on January 12, 2011 at 9:57 am said:
လုပ်လိုက်ကွ။ နောက်လူလိုရင် ကျုပ်ကိုလည်းခေါ်ဗျာ။
Lionslayer on January 12, 2011 at 10:50 am said:
အားပေး​ကြ​တော့ တက်​အောင် ဆက်​က​မှ​ဖြစ်​မယ်.. နောက်​တစ်​ကား ရိုက်​ဦး​မှ​ပါ… ဇာတ်​လမ်း​ကြို​ရှာ​နေ​ပြီ. ကွန်း​မန့်​ပေး​သူ​တွေ အကုန်​ထည့်​ရိုက်​မယ်… :D